Global Voices teny Malagasy · 20 Aogositra 2017
Tantara tamin'ny 20 Aogositra 2017
Eoropa Andrefana20 Aogositra 2017
Bilaogera Alemàna-Ejypsiana Navotsotra Rehefa Niharan'ny Herisetra Ara-tsaina Nandritra Ny 5 Andro
Ejipta20 Aogositra 2017
Navotsotry ny manampahefana Ejiptiana ilay bilaogera Alemana-Ejiptiana Philippe Rizk tamin'ny Alarobia rehefa notànana notampena-maso nandritra ny dimy andro tany amin'ny toerana tsy fantatra ary niharan'ireo karazana herisetra ara-tsaina.
Venezoela: Ny Fombandrazana Devoly Mandihin'i Yare
Amerika Latina20 Aogositra 2017
Azonao atao ny mitsidika ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia Dancing Devils of Yare izay ahitana ny rohy mankany amin'ireo lahatsoratra an-gazety raha mila fanazavana fanampiny momba ity hetsika ity ianao:
Azia Atsinanana20 Aogositra 2017
Nampisahotaka ny tao amin'ny aterineto ny sarin'ilay zazavavy kely nitondra ilay anadahikeliny mbola zaza tany an-tsekoly tany Shina. Taratry ny olana ara-tsosialy hatry ny ela eo amin'ireo ankizy nilaozan'ireo ray aman-dreniny hiasa any an-drenivohitra izany.
Sahara Andrefana: Dite Telo Kaopy
Tahaka ny kolontsaina maro, namorona fomba amam-panao sy fombafomba ara-tsosialy manodidina ny dite ireo mponina any Sahara Andrefana ary azontsika sary an-tsaina ny tany efitra, ny lanitra tsy misy rahona amin'ny alina, ny volana fenomanana ary ny dite (roa na telo kaopy)!
"Ilaina ny handrenesana ny feonareo, ny fitenenanareo, ianareo mihitsy."